Vhiki dzevakadzi dzekuvhara 2013
Mudivi iri kuvhara, izvo zvinoreva kuti inguva yekuti pabonde rakanaka kutenga shangu idzva. Musikana mumwe nomumwe achafara, nokuti vanogadzira vakagadzira mabheti akawanda anowanikwa muna 2013.
Iko ikozvino inogona kuitika kuti tive nechokwadi chokuti zvidikanwi zvekuvhura zvichave zvienzaniso zvakakwirira: bhodzi dzisina kujairika nehombodo-mashizha . Vakadzi vechikwata chechikwata ichi kuwa - kukunda-kukunda kusarudza, zvisinei, kufanana neshangu shangu. Muchirongwa chemuvara, zvakadzika uye mupfumi shades zvinosarudzwa.
Vashandi vanoratidzira mafashoni akasiyana-siyana, kubva kunonyanya kupisa, kuenda kuhombodo. Ivo vakabatana nemumwe pfungwa - nyaradzo. Vakadzi vechikwata chemafashoni uye madzimai echikwata pasina chitsitsinho, uye pazvitsitsinho zvemafambiro akatsiga, uye pachikuva chichafadza. Zvisingaenzaniswi mhando dzakagadzirwa ne-super-high hairpin dzinofanirwa kugara zvakakwana pamakumbo.
Kubwinya kwevakadzikadzi mabhizimusi muna 2013
Sezvatotaurwa kare, nzvimbo dzinotungamirira dzinobata mabheti akakwirira nezvitsitsinho zvezvikomo zvakasiyana-siyana, pamwe nehombodo-mashizha akaitwa sede. Mutevedzeri uri mufananidzo wemasokisi haafanire munhu wose, sezvo unokodzera zvakasimba pamakumbo. Zvinyorwa zvakashandurwawo zvakare, varimi vakasarudza "kuvadzidzisa" nematope.
Kana tikataura nezvekuMadokero-mienzaniso, ipapo nemwaka wega wega vanova vakadzi vakawanda. Izvi zvinogadziriswa nekuda kwezvishongo zvechic, mapikisi, zvigadzirwa zvemucheka zvesimbi, panzvimbo yaimbove yakakura zvikuru "cowboy" zvitsitsinho.
Kufarira muitiro warwo uye mazamu madzimai evhapiti madzimai, kazhinji pane imwe chete. Iyi sarudzo yakanaka kune vasikana vasikana. Rimwe bhonasi inoshamisa uye inofadza pads pabhootleg. Izvi zvinogona kuva furhu kana kukwaniswa kupera. Ichecheche inotarisa shangu shoma, apo inoratidzika sehudzi dzomusiya mavara akareba uye akareba.
A chip of the last season is a little round or shaped shaped sock. Sezvo "chinzvimbo" chiri mapikisa, zvikwata, zippers. Kana mazuva asina kutonhora zvikuru, uye mamiriro ekunze haasi kunaya, zvakakosha kusarudza mhando dzakagadzikana nezvigunwe zvakasununguka nezvitsitsinho zvakakwirira. Iyo yakareba yakareba yakasimba inowedzera kuwedzera ukuru hwegumbo.
Mavara chaiwo ehombodo dzevakadzi spring-autumn
Iyi yevhu inenge isingasviki, nokuti unogona kuona palette yose yemwaka yemirau (tsvuku, machena, maroon shades) muhombodo, sezvinoitwa mumakore mavara achapfeka shangu dzomukati. Kunyanya mabhii akadaro anoshanda muvhuro ra2013 pamabhodhi evakadzi rebheber.
Hatifaniri kukanganwa nezvekuita-gorosi, tsvuku, dema zvakare mune mafashoni. Unogona kutamba zvakasiyana. Kubudirira kutarisa zvisiri izvo zvinyorwa zvinyorwa, zvakadai seganda remhuka dzakapamhidza, tigera, ingwe. Iwe unogona kusarudza kuenzanisa mutemo wemuti.
Zvechokwadi zvinhu zvekuvhura uye shangu dzemazuva
Muchikwata, sekupedza kwegore, zvinonyanya kukosha kutarisa zvinhu zvehombodo. Kunyatsosununguka mumvura inonaya ichava nemvura isina kukwana yekuvhara mabhoti evakadzi. Kunyanya kufadza kune vakadaro vane mavara avo mavara.
Pakukwirira kwekududzirwa kune rakasvibira lacquered uye matte yekanda. Asi ruzha rwegore ra2013 raiva velvet. Kutsika, zvikwama zvechikwama , bhoti-mashizha kana mabhuti zvose zvakakosha. Mifananidzo yakadzika inotarisa inonakidza. Kunyanya kutarisa hutete. Suede boots rinotarisa zvakakwana pamakumbo chero ipi zvayo.
Nokuti vakashinga vachauya nemhinduro dzinoshamisa, kusanganisira shangu dzisina kuchena dzechisiki.
Vakadzi vechikoro chechikadzi 2013
Capsule style wardrobe mumutambo we kazhual - spring 2016
Manicure Mutsvuku nemasikati
Women's Leather Jackets - Fall 2013
Shoes - Fashion - Fall 2015
Mifananidzo yevakadzi vane mafuta 2018 - sarudzo yemifananidzo yemafashoni yemifananidzo yezviitiko zvose
Heeled shoe 2013
Mafirimu sneakers 2014
Shoes - Fall 2015 mamiriro
Yakasvika pakuzivikanwa kuti ndiani achagara nhaka George Michael
Nzira yekurega sei kuda munhu?
Glycerin yekushandisa mukati
Masikisi eGore Idzva nemaoko avo
Wedding wedding without mastic
Kuchengetedzwa kwekutenda muvana
Mhando ye linoleum yevhu
Chizvarwa chitsva antihistamines
Kubatsira kwe semolina pariji
Mariah Carey naMel Bee vari pamucheto wekusvitsa
Thrombone ACC - zviratidzo zvekushandiswa
Vhiki 30 dzekudzivirira - iyi ndeipi mwedzi yakawanda?
Sei mudzimai asingadi kushamwaridzana nemurume wake?
Zodiac chiratidzo Virgo - chimiro nekuenderana nemamwe zviratidzo
Zviwanikwa zvekutsvaga vanhu - kuipa nekubatsira
White T-shirt - uye chii chaunofanira kupfeka ichi chinhu chepasi rose chepfeko yevakadzi?
Zvigadzirwa zvemavara zveHalloween